Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo » I-Brand eNtsha yase-Indonesia: Sebenza nzima, Uhlakaniphile kwaye unyanisekileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
UMphathiswa wezoKhenketho kunye noQoqosho loBuchule, uSandiaga Salahuddin Uno, ukhuthaze abadlali bezoqoqosho bokudala ukuba banikele ingqalelo kwiinkalo ezizinzileyo zomsebenzi wabo, ukuze kukhawuleziswe ukufezekiswa kokhenketho olusemgangathweni. Oku kwathethwa nguSandiaga xa wayetyelele "Kriya Kayu Rik Rok" eMagelang, eCentral Java, eIndonesia.
I-World Tourism Network yabiza u-HE Sandiago Uno ngoyena mphathiswa wezokhenketho lwezentlalo kwihlabathi. Oku bekunge-9 kaMatshi, 2021.
NgoNovemba 21,2021, 4, umphathiswa ofanayo wazisa umgaqo we-11 AS - indlela yakhe yomlingo ukufumana iindwendwe ezili-XNUMX ezilahlekileyo zibuyela kwilizwe lakhe.
Umphathiswa wezokhenketho wase-Indonesia unethemba lokuba i-4 AS iya kuba yimilinganiselo ephambili yezokhenketho kunye namashishini okudala ukuze akhe amashishini abo kwaye avuselele uqoqosho lwelizwe.
Ukufezekisa injongo, uMphathiswa wezoKhenketho wase-Indonesia wenze iinkqubo ezijolise kwimigaqo ye-"4 AS": oko kukuthi i-Kerja KerAS (ukusebenza nzima), i-CerdAS (i-smart work), i-TuntAS (ngokucokisekileyo), kunye ne-IkhlaS (enyanisekileyo).
Olona Mphathiswa wezoKhenketho kwezeNtlalo uvela eIndonesia
Le migaqo "4 AS" yasekwa kulandela iimpembelelo zobhubhani we-COVID-19 kukhenketho kunye neshishini loyilo kwilizwe liphela, apho ngaphambi kokuba izithintelo zentlalo nezoqoqosho zilawule ukulinganisa ukusasazeka kwale ntsholongwane, yaba nezigidi ezili-16.11 zabakhenkethi abafikayo ngo-2019 kwaye yehla ngo 75% ukuya kwi-4.02 yezigidi ngo-2020.
Ukomeleza ukomelela kweshishini ngoqeqesho loshishino lwedijithali.
Urhulumente ebesebenza kweli nyathelo ngokusasaza inkuthazo yokubuyisela ukhenketho kunye namashishini oyilo.
Ukusukela kwisiqingatha sokuqala sika-2020, ishishini lokhenketho eIndonesia liye laphulukana nelahleko emalunga ne-85 yetriliyoni zeerupiya zaseIndonesia kwingeniso yokhenketho, kuqikelelwa ihotele kunye nevenkile yokutyela. ilahleko ejikeleze i-70 yezigidigidi Iirupiah zaseIndonesia.
Enye yeenkqubo linyathelo labafundi bezikolo ezihlalwa ngamaSilamsi ezibizwa ngokuba “Santri Digitalpreneur Indonesia” egxile ekuqeqesheni nasekufundiseni "santri" (abafundi) ukuba bafunde izakhono zedijithali kwaye bazisebenzise njengenkunzi yabo ukuze babe yi-digitalpreneur okanye basebenze kwishishini lokudala.
UMphathiswa wezoKhenketho wase-Indonesia uthatha inxaxheba kwingxoxo ye-WTN
Malunga ne-Indonesian Ministry of Tourism and Creative EconomyIqhutywa ngumbono wokwenza i-Indonesia ibe yindawo yokhenketho ekumgangatho wehlabathi, iSebe lezoKhenketho lase-Indonesia kunye noQoqosho lwezoQoqosho livelisa impumelelo eyahlukeneyo ukuze liqhubeke likhulisa ishishini loyilo e-Indonesia.
Iimfashini zefashoni kubafazi bamaSilamsi zikhula ngokukhawuleza e-Indonesia, kunye nomnqweno wokujonga umtsalane nge-hijab. Njengoko imfuno iqhubeka isanda, abaqulunqi basekhaya baqhubeka besenza iimpahla ezahlukeneyo zabasetyhini abangamaSilamsi ezintle nezikhethekileyo.
I-Kriya Kayu Rik Rok, eseMagelang, kuMbindi weJava, luphawu lwasekuhlaleni oluvelisa nokuphuhlisa imisebenzi yezandla eyenziwe ngenkunkuma ehambelana nokusingqongileyo ejikeleze amakhaya abo. URik Rok ukwabandakanyeka kukhenketho lwemfundo lwabantwana abafuna ukuhamba ngelixa befunda njengebatik, ukwenza udongwe, ukulima ubusi, ukufunda i-gamelan, ukudansa, kunye nabanye.
UMphathiswa wezoKhenketho kunye noQoqosho loBuchule uqinisekisa ukuba abadlali beehotele kunye neevenkile zokutyela kulo lonke elase-Indonesia baya belungela ngakumbi ukuphumeza isiqinisekiso se-CHSE (Ucoceko, iMpilo, uKhuseleko, kunye noZinzo lokusiNgqongileyo).